Soo dejisan FileZilla Server 0.9.60.2 – Vessoft
WindowsInternetkaWadaag wadaagaFileZilla Server
Bogga rasmiga ah: FileZilla Server
FileZilla Server – waa server awood leh oo FTP ah oo leh qaabka horumarsan ee sifooyinka. Software wuxuu ka kooban yahay server ah oo ka shaqeeya adeegga nidaamka iyo codsiyada taageerida fursadaha fogaanta ee maamulaya adeeggan. FileZilla Server waxay taageertaa nidaamyada RTP, SFTP iyo FTPS waxayna bixisaa heer lagu kalsoon yahay oo ah ilaalinta xogta sababtoo ah sirta SSL. FileZilla Server wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xaddido isticmaalka isticmaalaha ee server-ka, xayeysiisyada laga soocayo server ama cinwaanka IP-ga, hagaajinta saamiga isdabajooga ee faylalka gudbinta, xaddidan xawaaraha xawaaraha ugu badan, iwm. FileZilla Server waxay soo ururisaa tirakoobka hawlaha FTP-waxbarashada waqtiga dhabta ah ee u suurtagelisa in la ogaado kuwa isticmaala kuwaas oo iminka soo dejinaya faylasha ama ku hawlan falal aan sharci ahayn.
Xannibaadda isticmaalka cinwaanada IP
Xaddidaadda xawaaraha gudbinta faylka
Maamulaha sirta fog
Soo dejisan FileZilla Server
Faallo ku saabsan FileZilla Server
FileZilla Server Xirfadaha la xiriira